Apple TV namoaka horonan-tsary fampiroboroboana vaovao an'i Ted Lasso | Avy amin'ny mac aho
Apple TV namoaka horonantsary fampiroboroboana vaovao an'i Ted Lasso
Iray amin'ireo andiany andrasana indrindra amin'ny Apple TV, ankoatr'izay fototra, dia ny vanim-potoana faharoa an'i Ted Lasso, vanim-potoana faharoa izay hanomboka amin'ny 23 Jolay. Mba hamelomana ny fiandrasana, dia manana ireo tovolahy avy amin'ny Apple TV + nandefa horonantsary vaovao antsoina hoe Ny Lalana Lasso.
Ilay horonan-tsary fampiroboroboana vaovao dia miaraka amin'ilay iray vao noforonin'izy ireo manambara ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpilalao baolina kitra amerikana izay ho anisan'ny ekipa Olaimpika ao Japon, dia manambatra ireo sary nalaina tamin'ny vanim-potoana vaovao mandefasa tafatafa amin'ny fizarana faharoa izay milaza fa nisy fiatraikany tsara teo amin'ny fiainany sy ny an'ny mpijery ity andiany ity.
Ny vanim-potoana voalohany tamin'ity andiany ity dia fahombiazana lehibe teo amin'ireo mpitsikera sy mpampiasa, nahazo loka sy fanendrena maro. na dia Nandroso i Tim Cook amin'ny fotoana samihafa ny fanombohana an'ity vanim-potoana faharoa ity izay haharitra 15 andro ary hisy fizarana 12.
Ilay andiany, izay mahomby indrindra hatramin'ny nanombohan'ny Apple TV +, dia mitana toerana malaza ao amin'ny tranonkalany ary vao tsy ela akory izay dia nandefa tsipika fivarotana ofisialy miaraka amin'ny akanjon'ny ekipa baolina kitra Ted Lasso, satroka ary satroka.
Volana vitsivitsy lasa izay, ny iray amin'ireo mpamorona ny andiany dia nanambara izany ny fizarana fahatelo, efa vita sonia, no ho farany nataon'i Jason Sudeikis ho Ted Lasso. Nilaza i Sudeikis herinandro vitsivitsy lasa izay, izany raha tsy hoe mandray kamio avy any iMoney, Tsy nikasa ny hanohy ny andiany izy, satria any Angletera no horonantsary azy fa tsy any Etazonia izay onenany, izay manery azy handany fotoana be lavitra amin'ireo zanany kely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple TV namoaka horonantsary fampiroboroboana vaovao an'i Ted Lasso